I-OwnBackup: Ukubuyiselwa Kwezinhlekelele, Ukuhlungwa Kwe-Sandbox, Kanye Nokugcinwa Kwedatha kwe-Salesforce | Martech Zone
Eminyakeni edlule, ngangithuthele imishini yami yokumaketha ngiyiyisa endaweni yesikhulumi esaziwa kahle futhi esamukelwa kabanzi (hhayi iSalesforce). Ithimba lami lisungule futhi lasungula imikhankaso embalwa yokondla futhi besesiqala ukushayela ithrafikhi ehamba phambili… kuze kufike inhlekelele. Ipulatifomu ibithuthukisa kakhulu futhi isule ngephutha idatha yamakhasimende, kufaka phakathi neyethu.
Ngenkathi inkampani yayinesivumelwano sezinga lesevisi (I-SLA) leso sikhathi esiqinisekisiwe, sasingenayo isipele nokutakula amakhono ezingeni le-akhawunti. Umsebenzi wethu ubungasekho futhi inkampani ibingenazo izinsiza namakhono okuyibuyisela ezingeni le-akhawunti. Ngenkathi imiklamo yethu ibingabuye isetshenziswe kabusha, konke esikulindelayo namakhasimende umsebenzi kwasulwa. Kwakungekho, vele, ayikho indlela yokukhiqiza kabusha leyo datha ebucayi nebalulekile. Ngiyasola ukuthi silahlekelwe ngamakhulu ezinkulungwane, uma kungenjalo izigidi zamadola kumali engenayo. Ipulatifomu yasikhipha kunkontileka yethu futhi ngasheshe ngalushiya uhlelo lozakwethu.
Ngifunde isifundo sami. Ingxenye yenqubo yami yokukhetha abathengisi manje iqinisekisa ukuthi amapulatifomu anendlela yokuthekelisa noma yokulondoloza… noma i-API enamandla kakhulu engingathola ngayo idatha njalo. Ngeluleka amakhasimende ukuthi enze okufanayo.
Amapulatifomu webhizinisi ngokuvamile anezipele zesistimu ebanzi kanye nezipele ezakhelwe kuzingxenyekazi zazo zokuzivikela, kepha lawa mathuluzi awatholakali kalula kumakhasimende abo. Abanikazi beplatifomu beCRM bacabanga ngokungafanele ukuthi ngoba idatha yabo ye-SaaS isemafwini, ivikelwe.
Ama-69% ezinkampani ezikuhlelo lweSalesforce ziyavuma ukuthi azikulungele ukulahleka kwedatha noma inkohlakalo.
Izinkampani ezinjengeSalesforce ziyaphindaphindeka, zakha izinto ezintsha, futhi ziyahlanganiswa ezingeni elisheshayo elinamakhulu konjiniyela okungenakwenzeka ukuthuthukisa nokugcina i-codebase efanayo yamakhasimende ukuthi enze isipele futhi avikele imininingwane yawo. Ukugxila kwabo kukuzinza kwesistimu, isikhathi esengeziwe, ukuphepha, kanye nokwenza izinto ezintsha… ngakho-ke amabhizinisi kumele abheke izixazululo ezivela eceleni ezintweni ezifana nezipele.
Kubalulekile ukucacisa ukuthi i-Salesforce akuyona imbangela eyinhloko yokulahleka kwedatha. Eqinisweni, angikaze ngibabone ngephutha bachitha idatha yamakhasimende. Ukuphela kwedatha kwenzeke ngezikhathi ezithile, kepha angikaze ngiyibone inhlekelele (ungqongqoza ngokhuni). Futhi, iSalesforce inamakhono athile okuthekelisa yedatha eningi engasetshenziswa, kepha lokho akukuhle ngoba kungadinga ukwenziwa kwesipele, ukuhlela, ukubika, namanye amakhono asizungezile ukuze kugcwale Isixazululo sokubuyiselwa kwezinhlekelele.
Yiziphi izinsongo ezinkulu kudatha yebhizinisi?
Ukuhlaselwa kweRansomware - Idatha ebucayi nezwela ebucayi iyisisulu sokuhlaselwa kwe -hlengwareware.
Ukususwa ngengozi - Ukubhala ngaphezulu noma ukususa idatha kuvame ukwenzeka ngengozi ngabasebenzisi.
Ukuhlolwa Okubi - ukuhamba komsebenzi kanye nezicelo kwandisa amathuba okulahleka kwedatha ngokungaqondile noma inkohlakalo.
AmaHacktivists - ama-cybercriminals akhuthazwe ezombusazwe noma emphakathini aveza noma abhubhise idatha.
Abangaphakathi Ababi - abasebenza njengamanje noma abake baba khona, osonkontileka, noma osomabhizinisi abanokufinyelela okusemthethweni bangadala umonakalo uma ubudlelwano buba buthakathaka.
Izicelo ezinamandla - ngokushintshisana okunamandla kwezicelo ezivela eceleni, kuhlale kunethuba lokuthi ipulatifomu ingasusa ngephutha, ibhale ngaphezulu, noma yonakalise idatha yakho ebucayi.
Ngokujabulisayo, i-Salesforce's I-API-kuqala indlela yentuthuko iqinisekisa ukuthi isici ngasinye noma into yedatha ifinyeleleka ngokugcwele ngohlobo lwazo olubanzi lwe- uHlelo Lokusebenza Lokusebenza (Ama-API). Lokho kuvulela abantu besithathu ithuba lokuthatha igebe ekululameni kwezinhlekelele… okuyi Isipele Sakho kufezile.
I-OwnBackup inikeza izixazululo ezilandelayo:
Isipele seSalesforce nokubuyiswa - Vikela idatha nemethadatha enezipele eziphelele, ezizenzakalelayo nokululama okusheshayo, okungenangcindezi.
I-Salesforce Sandbox Seeding - Sabalalisa idatha kuma-sandboxes ngokusungula okusha nangendawo ekahle yokuqeqeshwa nge-Enhanced Sandbox Seeding.
Ukugcinwa Kwemininingwane YaseSalesforce - Gcina idatha ngezinqubomgomo zokugcinwa ezenziwe ngezifiso nokuhambisana okulula ne-OwnBackup Archiver.
Manje njengoba iCargill isebenzisa i-OwnBackup akudingeki sikhathazeke ngokulahleka kwedatha futhi. Uma sinenkinga, singaqhathanisa ngokushesha futhi sibuyisele idatha konke ngaphandle kokuqeda noma yisiphi isikhathi sokuphumula sedatha.
UKim Gandhi, Umnikazi Womkhiqizo Weqhinga Lamakhasimende eCargill FIBI Division
I-OwnBackup ikuvimbela ngokuqinile ekulahlekelweni yimininingwane ebucayi ye-Salesforce CRM nemethadatha enezipele ezizenzakalelayo nokubuyiselwa ngokushesha, ngaphandle kokucindezeleka… ngamanani entengo asezingeni lomsebenzisi.
Hlela i-OwnBackup Demo
Tags: ukuguqulaama-hacktivistsabangaphakathi ababiisipeleukuhlolwa okungekuhleI-ransomwareizicelo ezinamandlasalesforceukuguqulwa kokuthengiselanaizipele zabasebenziingobo yomlando yedatha yokuthengisaukubuyiswa kwezinhlekelele kwabasebenziimbewu yokuthengisa yesandbox